စြေးဦးလဲပေါကျ…အိမျအစောကွီးလဲ ပွနျရပွီ – Shwe Thadin
အဖိုး အသကျ (၇၈)နှဈတဲ့….အဖှားနှငျ့သားက အိမျမှာ…သားက ဂငျြလေးတှေ လုပျပေးတယျတဲ့…အဖိုးက ဆေးခွယျတယျတဲ့….အဖိုးရေ…ဂငျြလေးတှေ ဘယျလိုရောငျး?? သား ဗိုလျခြုပျစြေးမှာဆို ၃ထောငျရောငျး ကွတယျ…အဖိုးကို 2,000 Ksပဲ ပေးပါ။
ဘယျလိုဆော့ရတာတုနျး အဖိုး?? ဒီလိုကွိုးလေးဆှဲပွီ လကျပျေါ တငျထားလို့လဲရတယျ သား…ဟုတျ အဖိုး…စြေးဦးပေါကျပွီလား ??မပေါကျသေးပါဘူး သားရယျ… အရငျက ကော…တနေ့ ဘယျလောကျ ရောငျးရလဲ ??
တခါတလေ (၅)ခုပဲ ရောငျးရတယျ…မမှနျပါဘူး သားရယျ…ဟုတျ အဖိုး…ဘယျနှခုရှိလဲမသိဘူးနျော…အဖိုး မသိဘူး.ပွနျသှားလို့ အဖိုး အိတျထဲ ပါသှားတာ အဖိုး ပိုကျဆံလိုပဲ တှေးပါတယျ သားရယျ…သားတှကျကွညျ့တာ….(၁၂)ခုရှိတယျ အဖိုး ဟုတျလား…
ဟုတျ အဖိုး…သား အားလုံးယူမယျလေ…ဟာ…တကယျလား…သားက ဘာလုပျဖို့လဲ ?အဖိုးရှကေ့ သား ကလေးလေး ဆော့ဖို့ပါ။ သမီး ဆော့ဖို့လား…ဟုတျတယျ အဖိုး….(အဖိုးက သူမကို သငျပေးနတော ဆော့ပုံဆော့နညျးတှေ)အဖိုး ရော့….50,000 Ks ပါ။
သား ပိုနတေယျမလား…အဲ့လောကျမကဘြူးလေ…ဟုတျတယျ အဖိုး ပိုနတော အဖိုးယူလိုကျပါ။ အဖှားအတှကျ တခုခု ဝယျသှားလိုကျနျော … ကြေးဇူးတငျ လိုကျတာ သားရယျ…စြေးဦးလဲပေါကျ…အိမျလဲ အစောကွီးပွနျရပွီ။
ဟုတျ အဖိုး…ဂရုစိုကျပွနျနျော…ခဏ ခဏ သားနာမညျလေးပွောခဲ့ပါ…အဖိုး မတ်ေတာပို့ပေးခငျြလို့ပါ။ ဟုတျ အဖိုး….သား နမညျ ပူတူးပါဗြ…ကြေးဇူးတငျပါတယျ အဖိုးရယျ… (ကနြျောတို့နှငျ့အတူ ပူးပေါငျးပါဝငျလှူဒါနျးပေးကွသော (၇)ရကျသားသမီးအားလုံးကို အဖိုးကိုယျစား ကြေးဇူးတငျပါတယျဗြ )
အျော…အဖိုး အိမျစောပွနျရလို့ ပြျောနတောလေးကွညျ့ပွီ ပြျောနမေိတယျ။ ဆငျးရဲနှမျးပါး အဖိုးအဖှား မြားအတှကျ အတူအကှ ပူးပေါငျး ကူညီလှူဒါနျးလိုပါက ကိုပူတူးနှငျ့ဘျောဒါမြား ဖုနျး 09-5408437 သို့ဆကျသှယျလှူဒါနျးနိုငျပါတယျနျော…
အဖိုး အသက် (၇၈)နှစ်တဲ့….အဖွားနှင့်သားက အိမ်မှာ…သားက ဂျင်လေးတွေ လုပ်ပေးတယ်တဲ့…အဖိုးက ဆေးခြယ်တယ်တဲ့….အဖိုးရေ…ဂျင်လေးတွေ ဘယ်လိုရောင်း?? သား ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာဆို ၃ထောင်ရောင်း ကြတယ်…အဖိုးကို 2,000 Ksပဲ ပေးပါ။
ဘယ်လိုဆော့ရတာတုန်း အဖိုး?? ဒီလိုကြိုးလေးဆွဲပြီ လက်ပေါ် တင်ထားလို့လဲရတယ် သား…ဟုတ် အဖိုး…ဈေးဦးပေါက်ပြီလား ??မပေါက်သေးပါဘူး သားရယ်… အရင်က ကော…တနေ့ ဘယ်လောက် ရောင်းရလဲ ??
တခါတလေ (၅)ခုပဲ ရောင်းရတယ်…မမှန်ပါဘူး သားရယ်…ဟုတ် အဖိုး…ဘယ်နှခုရှိလဲမသိဘူးနော်…အဖိုး မသိဘူး.ပြန်သွားလို့ အဖိုး အိတ်ထဲ ပါသွားတာ အဖိုး ပိုက်ဆံလိုပဲ တွေးပါတယ် သားရယ်…သားတွက်ကြည့်တာ….(၁၂)ခုရှိတယ် အဖိုး ဟုတ်လား…
ဟုတ် အဖိုး…သား အားလုံးယူမယ်လေ…ဟာ…တကယ်လား…သားက ဘာလုပ်ဖို့လဲ ?အဖိုးရှေ့က သား ကလေးလေး ဆော့ဖို့ပါ။ သမီး ဆော့ဖို့လား…ဟုတ်တယ် အဖိုး….(အဖိုးက သူမကို သင်ပေးနေတာ ဆော့ပုံဆော့နည်းတွေ)အဖိုး ရော့….50,000 Ks ပါ။
သား ပိုနေတယ်မလား…အဲ့လောက်မကျဘူးလေ…ဟုတ်တယ် အဖိုး ပိုနေတာ အဖိုးယူလိုက်ပါ။ အဖွားအတွက် တခုခု ဝယ်သွားလိုက်နော် … ကျေးဇူးတင် လိုက်တာ သားရယ်…ဈေးဦးလဲပေါက်…အိမ်လဲ အစောကြီးပြန်ရပြီ။
ဟုတ် အဖိုး…ဂရုစိုက်ပြန်နော်…ခဏ ခဏ သားနာမည်လေးပြောခဲ့ပါ…အဖိုး မေတ္တာပို့ပေးချင်လို့ပါ။ ဟုတ် အဖိုး….သား နမည် ပူတူးပါဗျ…ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဖိုးရယ်… (ကျနော်တို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်လှူဒါန်းပေးကြသော (၇)ရက်သားသမီးအားလုံးကို အဖိုးကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ )
အော်…အဖိုး အိမ်စောပြန်ရလို့ ပျော်နေတာလေးကြည့်ပြီ ပျော်နေမိတယ်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါး အဖိုးအဖွား များအတွက် အတူအကွ ပူးပေါင်း ကူညီလှူဒါန်းလိုပါက ကိုပူတူးနှင့်ဘော်ဒါများ ဖုန်း 09-5408437 သို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်နော်…